China Gasi-mvura booster humburumbira vagadziri uye vanotengesa | Vishi
Chinhu / Rudzi
Yakajairwa Rudzi rweKusimudzira Cylinder Series
2-7Kg / cm2 Dry Compress Mhepo Mushure mekusefa
(Vamwe Vanoshanda Teirpertuers Vachave Vanokumbirwa)
50-700mm / s
Oiri Cylinder Ivimbise Kushushikana
300kg / cm2
Mhepo Cylinder Vimbisa Pressure
15kg / cm2
10 Nguva / min
1. Pistoni mhando
Iyo imwechete pisitoni tsvimbo hydraulic cylinder ine pisitoni tsvimbo pane imwe chete kumagumo.Ichi chimwe chete pisitoni hydraulic cylinder. Inlet uye nzira A uye B kumagumo ese maviri anogona kupfuudza mafuta ekumanikidza kana kudzorera mafuta kuti aone maviri-nzira kufamba, saka zviri inonzi double-acting cylinder.
Iyo pisitoni inongofamba ichienda kuneimwe nzira, uye nzira yayo yakatarisana inofanira kuzadzikiswa nevekunze simba, asi kurohwa kwayo kunowanzo kuve kwakakura kupfuura kuya kwepiston hydraulic cylinder.
Piston mhando hydraulic cylinder inogona kuganhurwa kuita imwechete bar uye mhando mbiri bar yezvivakwa zviviri, iyo yakatarwa nzira nesirinda block yakagadzika uye pisitoni tsvimbo yakagadzika mhando mbiri, zvinoenderana nekuita kwemvura yekumanikidza ine imwechete yekuita mhando uye kaviri chiito mhando. Mune imwechete-inoita hydraulic cylinder, iyo yekumanikidza mafuta inongopihwa kune imwe mhango yeiyo hydraulic cylinder, uye iyo cylinder inoziva iyo imwechete-yekufamba kufamba neyakaomeswa emvura, nepo yekudungamidzana-yekufamba kufamba kunoonekwa nevekunze masimba (senge simba rematsutso, huremu hwakafa kana mutoro wekunze, nezvimwewo.) Kufambisa kwepiston munzira mbiri dzeiyi-inoshanda hydraulic cylinder inopedzwa nekuita kwekumanikidza kwemvura kuburikidza nekushandura oiri yemafuta emakamuri maviri.
2. Plunger mhando
(1) Iyo plunger mhando hydraulic cylinder imwe chete inoita hydraulic cylinder, hydraulic kumanikidza inogona chete kuwana nzira yekufamba, kudzoka kweiyo plunger kunoenderana nemamwe ekunze mauto kana huremu hweplunger;
(2) Iyo plunger inotsigirwa chete nesilinda liner uye haibate nesilinda liner, saka iyo cylinder liner iri nyore kugadzirisa, saka inokodzera kuita refu sitiroko hydraulic humburumbira;
(3) Iyo plunger inogara iri pasi pekumanikidzwa painenge ichishanda, saka inofanirwa kuve nekuomarara kwakaringana;
(4) Kurema kweplunger kunowanzo kuve kwakakura, kana kukaiswa kwakatwasuka, zviri nyore kutsvedza nekuda kwekuremerwa, zvichikonzera kusakara kwezvisimbiso uye gwara, saka kushandiswa kwayo kwakamira kunonyanya kunaka.
3. Telescopic mhando
Iyo inodzoserwa hydraulic cylinder ine maviri kana anopfuura mazinga episton, iyo pisitoni mune inodzoserwa hydraulic humburumbira kubva muhombe kuenda kudiki, uye hapana mutoro unodzoserwa odhita unowanzo kubva kudiki kuenda kune yakakura. ipfupi, chimiro chakanyanya kuumbika.Rudzi rweiyo hydraulic cylinder inowanzo shandiswa mukugadzira michina nemuchina wekurima.Pane akawanda mapistoni mune kamwechete kufamba, imwe neimwe piston inoteedzana kufamba, yayo yekumhanyisa kumhanya uye yekuburitsa simba inoshandurwa.
Pashure: Hydraulic booster humburumbira
Zvadaro: Gasi-mvura booster mafuta humburumbira
Yakakwana twin tsvimbo humburumbira YCXSJ
Zvishoma nezvishoma mumatope gwara mhando 4 nzwara pneumatic munwe YMHS4